कतारले किन फर्कायो २० नेपाली कामदार ? « Postpati – News For All
कतारले किन फर्कायो २० नेपाली कामदार ?
चैत ४, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलिन नदिन गरेको सावधानीलाई बेवास्ता गर्ने २० नेपाली कामदारलाई कतारले फिर्ता पठाइदिएको छ । दुई जना दुई दिनअघि र १८ जना सोमबार फिर्ता भएका हुन् ।
यूएई, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन र कुवेतले पनि घरबाट बाहिर ननिस्कन स्वदेशी एवम् विदेशी सबैलाई आग्रह गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले यसबारे सूचना प्रवाह गर्न दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । यो खबर चन्द्रशेखर अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।